कविताकै भाषा लिएर | प्रवीण बानियाँ | Prabin Baniya
Written on February 28th, 2014 by Prabin
Posted in व्यक्ति-अभिव्यक्ति
साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्ला केही दशकमा नेपाली कविता ठेगाना हराएर कतै भौतारिइहेको फकीरजस्तै भयो । कवितालाई आम मान्छेले हेर्न छाडिदिए । कवितालाई प्रेम गर्न छाडिदिए । कवितादेखि धेरै पाठक विकर्षित भए । यो नेपाली कविताका लागि सबैभन्दा धुमिल समय रह्यो । यसरी उन्नत कवि र कविताको तीव्र अभाव भइरहेका बेला अभावको त्यो खाडल पुर्न हिम्मतका साथ आएका थोरै कविहरुमध्येका एक कवि हुन्– रमेश सायन । जो आफ्नो कविताशक्ति र सामथ्र्यका बलमा सुकिला र शक्तिसाली कविताहरु लेखिरहेका छन् । र, दृढ छन्– नेपाली कविताको राजमार्गलाई अरु विस्तार गर्न ।
अहिलेलाई हेर्दा रमेश सायन सिर्फ ‘एकथान कवि’मात्रै हुन् । यी एकथान कविसँग केही थान स्वतन्त्र र उज्याला कविताहरु छन् । ती नै कविताको उज्यालोले उनी कविताको यो आँधीमय बाटोमा हमेसा हिँडिरहेका छन् । उनी स्वयंलाई पनि थाहा छैन कि यो बाटोले उनलाई कविताकै मुलबाटोमा निकाल्छ, अथवा अलिपर पु¥याएर भिरबाट खसाल्छ । तर, उनी झोलाभरि अक्षरहरु बोकेर अथवा अक्षरहरुकै सिँढी बनाएर कविताको पहाड उक्लिरहेका छन् । कविताको पाठशालाबाट यो देशका निम्ति चाहिँने उज्यालो बोकेर कुदिरहेका छन् ।
यौटा असल कविलाई देशको यौटा ‘आर्ट ग्यालरी’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, म भन्न सक्तिँन । तर, उनका केही थान कविताहरु पढिसकेपछि मलाई लागिरह्यो– कवि रमेश सायन यो देशको यौटा ‘आर्ट ग्यालरी’ हुन् । कविताका थुप्रै कोलाज बोकेर हिँड्ने चित्रकार हुन् । जोसँग यो देशका उन्नत सपना–विपना छन् । आशा–निराशाहरु छन् । यही देशका सुख–दुःख, भोक–तिर्खा, घाउहरु अनि मुस्कानहरु हरबखत उनीसँगै भइरहन्छन् । कविताको जति लामो सफर गरे पनि अथवा कवितादेखि जति भागे पनि उनी यही देशको भूगोलभित्रै हुन्छन् । देशको सिमाना नाघेर हिँड्दैनन् उनी । बरु, उनको कविता–चेत र काव्यिक हृदय घुमिहिँड्छ, विश्वभरि ।
रमेश सायनका कवितामा पाइने सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो– भाषाको सौन्दर्य र त्यसको सामथ्र्य । कविताामा कविताकै भाषा निर्माण गर्न सक्ने र कविताकै जीवन दिन सक्ने उनको कविताप्रतिको आत्माविश्वास र प्रेम कम लोभलाग्दो छैन । उनी यो देशका अनेक तस्बिरहरुलाई बडो प्रेमले आफ्नो हृदयमा टाँगेर जति सजिलै संसारका सुन्दर विम्बहरु निर्माण गर्छन्, त्यसलाई त्यति नै सहज र सुन्दर ढंगले उपयोग पनि गर्छन् । उनका कवितामा हृदयले कुँदेको भाषा भेटिन्छ । हृदयकै मसी भेटिन्छ । मस्तिष्कले निफनेको चेतना भेटिन्छ । बर्षौंदेखि प्रेमले बटुलेर राखेका विम्ब र मिथकहरु भेटिन्छन् । जब कवितामा यस्ता कुरा हुन्छन्, त्यहाँ कवितालाई कसैले सुरक्षा दिइरहन जरुरी पर्दैन । कविता आफ्नै शक्तिका बलमा सुरक्षित हुन्छन् ।
आमा पत्रमा पठाउनु हुन्छ
आफ्नै आयु घटाएर मेरो दिर्घायु
पहरामा ठोकिँदै खसेको घाम
र एक लय भिरफूलको गीत
चैतको पश्चिमा हुरी
र बगैंचामा खसेको हजारीको धारा
आफ्ना चोखा ईन्द्रिय
र मेरै लाटो चेतना
आमा आधा मिलेको, आधा नमिलेको
मेरै जीवनलय पठाउनु हुन्छ ।
म ठान्दछु, उत्तम कविता विचार र कलाले निर्माणा गरेको यौटा इक्विबिलिया हो । म यस्तो पनि ठान्दछु कि कविता नितान्त सामाजिक जेनर हो । सामान्य सत्यको झ्यालबाट हेर्दा पनि कविता समाजको यौटा उत्तम भाका हो । जसले समाजकै गीत गाउँदछ । भाषाका माध्यमबाट समाजसँग समानान्तर संवाद गर्दछ । तर, कवि र कविता बढी सामाजिकरण भइदिँदा बेलाबेला राजनीतिक रङ छ्यापिन्छ । यौटा कविको कोलाजमा राजनीतिक नाराका पम्प्लेटहरु टाँसिन्छन् । त्यस्तो बेला कवितालाई नारा र थ्योरीबाट सर्लक्क जोगाउन कलात्मक शैली आवश्यक हुन्छ । अन्ततः यी दुवैको हाइब्रिडले उत्तम जातको कविता उत्पादन गर्छ । मलाई लाग्छ, रमेश सायन त्यही कविताको ब्रान्ड उत्पादन गर्ने जेनर कवि हुन् । जोसँग कविताको विशाल हृदय छ ।
रमेश सायनका कविताहरु पढिसकेपछि मलाई भन्न मन लागेको एउटा अर्को कुरा हो– उनी कवितामा देशीय मौलिकता बोकेर हिँड्ने ती कवि हुन्, जोसँग कविताको अत्यन्तै राम्रो मौलिक कमाण्ड छ । त्यसलाई कविताप्रतिको उनको निष्ठा भनिदिए पनि हुन्छ । अथवा, कविताप्रतिको उनको अडान । यही कुरालाई अगाडि राखेर हेरियो भने उनका कविता जहाँ गए पनि यही राष्ट्र बोकेर हिँडेझैँ लाग्छ । यही राष्ट्रका सपना बोकेर डुलेझैँ लाग्छ । यही राष्ट्रलाई खाँचो पनि उज्यालोको खोजिमा अँध्यारोविरुद्ध उत्रिएझैँ लाग्छ । अतः उनका कवितामा बारम्बार भेटिइरहने र महसुस भइरहने कुरा पनि यिनै हुन् । जो कविताका रङहरु पनि हुन् ।
कविताको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ, ‘नबुझिने कविता’ लेख्न जति सजिलो हुन्छ, आम पाठक र मानिसले ‘सजिलै बुझ्ने’ कविता लेख्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ । हामीकहाँ अझै पनि थुप्रै कविहरु प्रयोगवादी भएर नबुझिने र अप्ठेरा कविताहरु लेखिरहेका छन् । त्यस्ता कविता लेख्नु अत्यन्तै सजिलो हुँदो हो । तर, आम मानिसले बुझ्नेगरी कविताकै भाषामा कविता लेख्नुचाहिँ बडो गाह्रो हुँदोरहेछ । रमेश सायन, त्यो भीडका कवि होइनन् । यी आम मानिसको हृदयले बुझ्ने कविता लेख्छन्– कविताकै सौन्दर्यतामा । कविताकै भाषामा ।
कवि रमेश सायनको काव्यिक सामथ्र्य भिन्न र विशिष्ट छ । उनका कविताहरुमा भेटिने शालिन विद्रोह र मौन कम्पन निकै प्रिय हुन्छ । उनका धेरै कविताहरुमा सीमान्तकृत जीवन र त्यस जीवनले चाहेको परिवर्तन उत्कृष्टमात्रै छैन, ती आवश्यकीय पनि छन् । उनी कवितामार्फत् सहज र शालिन विद्रोह बोल्छन् । यथास्थितीसँग उनी पनि अरुजस्तै असन्तुष्ट नै छन् । उनीसँग पनि छन्– यावत् विमतिहरु । कति ठाउँमा त उनी यो वर्तमानसँमात्रै असन्तुष्टि पोख्दैनन्, आफैँविरुद्ध पनि उनको व्यापक असन्तुष्टि छ । तर, त्यो असन्तुष्टि पोख्न उनी चर्को बोल्दैनन् । त्यस्तो असन्तुष्टि र विरोध मौन र हार्दिकताका साथ उठ्छ । तर, कवितामा त्यसको प्रभाव चाहीँ गहिरो र स्थायी हुन्छ ।
म बडो विश्वासका साथ भन्दछु– कविताविरुद्ध राँकेजुलुस नै निकाले पनि कविता, कविता नै हो । विश्व साहित्य बजारभरि अहिले कविताप्रतिको आकर्षण घट्दो भए पनि, भारतीय बजारमा डिस्कोर्स निकै चले पनि, नेपाली बजारमा पाठकहरु उपन्यासतिरै एकोहोरिए पनि इतिहासदेखिको कविताको प्रतिष्ठा र अस्तित्व मरिसकेको छैन । कविताको इतिहास मेटिइसकेको छैन । बरु, खाँटी कुरा त यो हो कि कविताको भाषिक सामथ्र्य र सौन्दर्य, हृदयी र जादुमय भाषा अरु विधामा गयो, र ती नै विधाहरु धेरै पढिए पछिल्लो समयमा । पढिँदैछन् पनि ।
मेरोे घरसम्म आईपुग्दा
बतास पनि एकपल्ट अलमलिन्छ
मेरो घरको छानोबाट उडी गएको चंगा
लट्टाई सम्झेर सरासर फर्कन सक्दैन
स्वयं मेरी प्रेमिका
दसौंपल्ट सोधेर आईपुग्छिन् मेरो ठेगानामा
सयौँपल्ट सोधेर आईपुग्छन् मेरो आँगनमा
वर्षाै पहिले परदेशमा हुँदा
बा–आमा सम्झेर रजिष्ट्ररी पत्र पठाए थें
आफ्नै घरको हुलाकी ठेगानामा
म नै आएँ पहिले,
आफ्नै ठेगाना सोध्धै सोध्धै हुलाकी पत्र आएन ।
(मृत्यु आइपुग्ने ठेगाना)
‘साताको साहित्य डट् कम’ ले सन् २०१३ का लागि प्रदान गर्ने ‘साताको साहित्य पुरस्कार’ रमेश सायनलाई प्रदान ग¥यो, ताम्रपत्र र रु.बीस हजारको थैलीसहित । यसदेखि बाहेक उनले रातारात चर्चा भैहाल्नेगरी खास केही गरेका छैनन् । लेखेका पनि छैनन् । तर, अहिले उनी जे लेख्दैछन्, उत्तम लेख्दैछन् । जति लेख्दैछन्, त्यो पर्याप्त लेख्दैछन् । उनका नयाँ–पूरानागरी ३ दर्जन कविताहरु संगृहीत पुस्तक ‘भागेर भूगालेभरि’ प्रकाशनको क्रममा छ ।
गहिरो खोला होहल्ला नगरी शान्त भएर बग्छ । सायन त्यही नदी हुन्, जो यौटै लयमा बगिरहेका छन् । उनी भाषा, साहित्यको केन्द्र भनिने काठमाडौंबाट अलग्गै बस्छन्, मोफसलमा । त्यहीँ बसेर उनी कविताका निम्ति पसिना बगाइरहेका छन् । उनलाई कुनै गुट–उपगुट वा सर्कलले छुँदैन । उनलाई कुनै गुटमा जोडिनु पनि छैन । न त त्यसप्रति उनलाई विश्वास नै छ । उनी आफ्ना कविताझैँ चोखा र स्वतन्त्र छन् ।
(नागरिक-पश्चिमेली, २०७० फागुन १६)
« काव्य – शिविरमा हेमप्रभास
एमाओवादी खुम्चिनुका कारणहरु »
10 Responses to “कविताकै भाषा लिएर”
ताप्लेजुङ डायरी says:
सुदूर पूर्वका एक उज्याला नक्षत्र ! गम्भीर लेखनमा उन्नत प्रयत्न गरिरहेका यी लेखक, समीक्षकको कलम अझै निखारिँदै जाओस्, शुभकामना ।
पस्तुत लेखन एउटा गम्भीर टीप्पणी हो । अरु कुरा त सधैँ तपशिलकै त हुन् ।
wah ! pathaniya lekh !
Anamika Aryal says:
poem ni goood, sami6ya jhan good……..
केही समयअघि रेडियो कान्तिपुरबाट भूपेन्द खड्कासँगको एक अन्र्तवार्तामा यी कवि (Ramesh Sayan) को बारेमा केही जानें, कविता पनि सुनें । थोरै प्यास त्यतिबेला मेटियो ।
तर, धेरै प्यास आज यो लेखबाट मेटियो । लेख निकै प्रभावपूर्ण र कलात्मक छ । एकपल्ट हैन, पटकपटक पढेर आनन्द लिएँ मैले त ।
स्वस्थ प्रतिक्रिया तथा सुझावका लागि सबैप्रति म नमन छु । आगामी दिनहरुमा आफूले सकेको राम्रो गर्ने कोसिस सधैँ हुने छ ।
Purnima Sapkota says:
Oh ! Serious writing, heart touching yar…. Keep it up hai Pravin Baniya ji.
Gyanu Thapa 'Sirjan' says:
priya kabi/lekhak ko sundar sami6ya, tippani. aba kabiko aaune book padna aatur 6u ma ta….
Dhana Bista says:
ramro lekhani….. ajhai ramro garnuhune6 vanne aasa pani…
Ramesh Baral 'Dillagi' says:
good ! good v good !
Siksha Parajuli says:
कवितामाथिको गहन ‘डिस्कसन’….. ।